Casharrada ku saabsan Linux iyo Open Source - Ikkaro
Linux waxay bedeshay habka aan u shaqeeyo oo aan u isticmaalo kombuyuutar, PC iyo laptops labadaba.
Ahaanshaha OpenSource, waxay kuxirantahay aduunka sameeyaha, jabsiga, wax ka badalida, DIY. Haddii aadan waligaa isku dayin, waa inaad siisaa isku day.
Qeybtaan waxaan kula hadli doonaa oo aan ka ururin doonaa macluumaad ku saabsan GNU Linux iyo waxa ka duwan qaybinta, sidaan u tijaabinayno.
Ma ogtahay waxa Linux yahay? Miyaad u malaynaysaa inaanay kuu ahayn adiga? Sidee bay kuu caawin kartaa? Maxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso? Ma jiraa macluumaad ku saabsan Linux?
Laakiin taasi miyaanay ahayn kombiyuutarrada kombiyuutarka? Tan waxaan kuugu jawaabayaa. Maya. Qof kastaa wuu rakibi karaa qaybinta sida Ubuntu, Linux Mint, Fedora, iwm. Iyada oo is-dhexgal muuqaal ah oo tallaabo tallaabo ah lagu hagayo. Aad u fudud. Looma baahna in la isticmaalo qunsulka ama xariiqa koodhka, dhammaantood guji jiirka.
Waxaan ka jawaabi doonnaa su'aalaha intiisa kale: 9